Wadamada Midowga Yurub oo dhimaya Dhaqaalaha ay Siiyaan Amisson iyo Caqabada soo Waajihi Karta Xukuumada Somalia. - Haldoornews
Wadamada Midowga Yurub oo dhimaya Dhaqaalaha ay Siiyaan Amisson iyo Caqabada soo Waajihi Karta Xukuumada Somalia.
Muqdisho(Haldoornews)-Midowga Yurub oo ah maalgeliyaha ugu weyn ee ciidamada AMISOM ee Somaliya ku sugan ayaa la sheegayaa inuu qorshaynayo sidii uu 20% uga jari lahaa dhaqaalaha uu siiyo ciidamada AMISOM.
Wargeyska Sunday Nation ee ka soo baxa wadanka Kenya ayaa dhawaan qoraywarbixin uu ilo diblomaasiyadeed ka soo xigtay oo u sheegaysay in Midowga Yuu jarayo dhaqaalahaas, “Midowga Yurub wuxuu doonayaa inuu 20% ka jaro dhaqaalaha uu siiyo AMISOM.” Sidaas waxa yidhi diblomaasi jariirada u waramay oo ka cudur daartay in magaciisa la sheego.
Midowga Yurub, waxa la sheegayaa inuu go’aankiisan ku wargeliyay madaxda gobalka ee ay ku bahaysan AMISOM oo ah ciidamada ku sugan Somaliya ee ilaaliya dawladda Somaliya.
Haddii uu Midowga Yurub talaabadan qaado oo uu kaga dhabeeyo, waxa soo baxay warar sheegaya suurtogalnimada inay wadamada Kenya iyo Uganda ciidamadooda kala baxaan wadanka Somaliya, mar haddii laga dhimay dhaqaalaha lagu siiyo ilaalinta dawladda Somaliya.
Wargeyska New Vision ee isna ka soo baxa wadanka Uganda, ayaa toddobaadkan lagu qoray warbixin ka digaysa halista ka dhalan karta haddii ay Somaliya ka baxaan ciidamada wadamada Uganda iyo Kenya, oo halbawle u ah ilaalinta Madaxweyne Xasan Sheekh iyo dawladiisa.
Dadyowga Kenya iyo Uganda ayaa dawladahooda warbaahinta u mariya farriimo ay ugu sheegayaan inay ciidamadooda kala baxaan wadanka Somaliya, iyagoo labadan dal ay dagaalada ay Al-Shabaab kula jiraan kaga dhinteen askar tiro badani. Geesta kale, waxa iyana aad u wiiqantay niyadda ciidamada Burundi oo uu wadankooda ka jiro khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay murashaxnimada madaxweynaha wakhtigan talada haya. Dawladda Somaliya ayaa hore u sheegtay in siyaasadda ka jirta wadanka Burundi ay saamayn ku yeelatay askarooda AMISOM ee Somaliya jooga oo ay qaarkood dilal isu gaysteen.
Si kastaba ha ahaate, haddii uu Midowga Yurub jaro 20% dhaqaalaha uu siiyo AMISOM, waxa suurtogal ah inay wiiqanto awooda ciidamada AMISOM, waxaana markaas halis galaya Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh iyo dawladiisa oo ay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab.
Xasan Sheekh oo wakhtigii la doortay ay ku eegtahay dabayaaqada sannadka dambe ee 2016, ayaa u muuqda inay beesha caalamka oo markii hore taageertay ay ku hungowday hoggaamintiisa.
Dagaal Culus oo Ciidamada Dowladda Somalia iyo kuwa Al-shabaab ku dhexmaray Duleedka Baydhabo +Dhimasho ka Dhalatay.
Daawo Darsigii ugu Dambeeyey ee maanta Su’aalaha Diiniga ee ay Dadweynuhu soo waydiiyaan Sheekh Muxamed Cumar Dirir oo maanta la soo Gabo gabeeyey…..DAAWO VIDEO